Faa'iidooyinka Qaybaha Tambarka Maaddaama farsamaynta saxaafadda inta badan lagu sameeyo heerkulka qolka, waxaa sidoo kale loo yaqaan shaabbadda qabow. Sameynta shaabaddu waa mid ka mid ah hababka loo maro birta cadaadiska birta. Waa aalad sameysa teknoolojiyad injineernimo oo ku saleysan aragtida qallooca birta birta. Qalabka ceyriinka ah ee lagu shaabadeeyo shaashadda guud ahaan waa xaashi ama qaawan, sidaa darteed waxaa sidoo kale loo yaqaan shaabad bir ah. (1) Saxsanaanta cabbirka ee qaybaha shaabad waxaa damaanad qaaday caaryada, waxayna leedahay isla ...
Sida horseedka ah caaryada duro caag ah gaare Shiinaha, waxaan ku takhasusay samaynta wasakhahaasi duro caag kala duwan oo loogu talagalay baabuurta, qalabka guriga, qalabka caafimaadka, korantada iyo qalabka isboortiga, iyo sidoo kale codsiyada guud warshadaha OEM. Shirkaddayadu waxay ka kooban tahay aag ka badan 3,800 mitir laba jibbaaran aqoon isweydaarsi, oo ku hareereysan gaadiid ku habboon. Waqtigan xaadirka ah, kooxdeena waxay gaareysaa in ka badan 150 qalab sameeyeyaal aad u fiican Shiinaha iyo hantida raasumaalka in ka badan 15 milyan RMB. Awooddeenu waa ...
Dhimashada Dhimashada Waa maxay dhimashadu? Cadaadiska loo tuurayo waxaa loo yaqaan 'cast casting Die-casting' taas oo dareere daawaha la shubay lagu shubo qolka cadaadiska, daloolka caaryada birta ah waxaa lagu buuxiyaa xawaare sare, dareeraha daawaha ahna waa la xoojiyaa cadaadiska si loo sameeyo kabka. Faa'iidada iyo faa'iido darrida tuurista dhinta: Faa'iidada: tayada wax soo saar tayo sare leh oo tayo fiican Qiimo Faa'iido daro: maaddadu waxay ku kooban tahay aluminium zinc magnesium Lead tin daasad ayaa loo isticmaali karaa in lagu shubay illaa hadda. Expe ...
Naqshadeynta qaabaysan waa la aqbalaa. Amarada OEM / ODM waa la soo dhaweynayaa. Waxaan nahay qayaxan wax soo saarka sida ay macaamiisha 'muunad ama daabac. Fadlan si xor ah nala soo xiriir annaga oo ah saaxiib wanaagsan haddii aad xiisaynayso badeecadeena iyo adeeggayaga. Kastamyada saxsanaanta qaybaha dhinta Qaab diyaarinaya iyo sameynta Nooca daloolka / muuska-godka isla qeybaha / daloolka qoyska 2-3 oo la beddelay caaryada isku beddelka sheyga SKD61, H13, Dievar, QDN, 8407, 2234V, TQ1, 2343, 45 # steel , iwm Heshiis cabbir ...